Senses of Layers : Myint San Myint | PanSuriya Art Post
Senses of Layers : Myint San Myint
26 December 2011, 02:02
Filed under: exhibit | Tags: မြင့်စံမြင့်, burmese, burmese art, burmese comtemporary art, burmese painter, M San Myint, myanmar art, Myanmar contemporary art, myanmar painter, myint san myint
“I grew up with silkscreening, it is the family business. It was silkscreens that first excited my appreciation. Most of my most of my works have come to include some silkscreening. To build the silkscreen intoawork of art, I create layers upon layers, using strokes and flicks of the brush as well. Images emerge from between these layers, and I focus on the meanings of the images, the variations, the depths, the hints, the shadows. That is the art of it.”
Myint San Myint’s techniques do not reproduce well inaphotograph. You need to see the layers on canvas, so come to his new exhibition, starting3January 2012 to explore them at Pansodan Art Gallery.
ကျွန်တော်သည် မိရိုးဖလာအရ ပိုးပန်းချီပညာနှင့် အကျွမ်း​ဝင်ခဲ့​ပါသည်။ ပိုးပန်းချီ​ဖန်တီးမှုက​​ကျွန်တော်၏​အာရုံ​ခံစားမှုများ​အတွက် အင်အား​ဖြစ်​စေခဲ့သည်။ ပိုးပန်းချီနှင့် အကျုံး​ဝင်သော​ဖွဲ့စည်းမှု အနုပညာကိုသာ အများဆုံး​လုပ်ဖြစ်​လာခဲ့သည်။ အနုပညာလက်ရာ​တစ်ခုဖြစ်​လာ​အောင် ဖန်တီး​ရသော​အလွှာလွှာ အထပ်ထပ်၊ ဆေးစက်၊ ရေးချက်။ ထိုအလွှာ​များ​ကြားက ပေါ်လာ​သော​အရုပ်များ၊ ထိုအရုပ်များကြားမှ အနက်​အရှိုင်း၊ မတူခြားနားသော ပုံရိပ်တို့၊ ရေးချက်တို့ဖြင့် ဖွဲ့စည်း​သွားသော အဓိပ္ပါယ်တို့သည် ကျွန်တော်​ဝင်စား​ကျက်စားရာ အနုပညာ​​ဖြစ်လာ​ကြသည်။
ထိုသို့ ဖန်တီးရင်း ဆရာ​ဗဂျီ​အောင်စိုး၏ လက်ရာများကို အမြတ်​တနိုးဖြင့် ပြန်လည်​တင်ပြ​ခြင်း​အနုပညာတစ်ခု​အဖြစ်​​​ဖန်တီး​ဖြစ်​သည်မှာ ကျွန်တော့်အတွက် စိန်ခေါ်မှု​ကြီးမား​လှသော မှတ်တိုင်​တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
Myint San Myint’s paintings are also available from Caphe House in London, from Heriot-Grant Gallery, shipping worldwide.
[…] Senses of Layers : Myint San Myint […]
Pingback by myint san myint « PanSuriya Art Post6January 2012 @ 21:34